काठमाडौँ । खुट्टाको पैतालामा मालिस गर्दा शरीरमा विभिन्न फाइदाहरु हुन्छन्। अझ राति सुत्नुअघि खुट्टाको पैताला मालिस गरेमा स्वास्थ्यलाई निकै नै फाइदा हुने विशेषज्ञहरु बताउँछन्। सुत्नुअघि पाइतालामा मज्जाले १५ मिनेट मालिस गर्नुभएमा शरीरको मेटाबोलिजम ठीक रहन्छ । यस्तै राति पैतलामा मसाज गर्दा तौल घट्ने र बोसो पनि कम हुन्छ। यस्तै सुत्नुअघि …
काठमाडौँ । हुन त तुलसीको पातले विभिन्न किशिमका स्वास्थ्य समस्याहरुलाई निर्मुल पार्ने गर्दछ। आयुर्वेदमा पनि तुलसीको महत्वका बारेमा निकै चर्चा गरिएको छ। करिब(करिब सबै नेपालीको घरमा तुलसीको पात राखिएको हुन्छ भन्दा अतियूक्ती नहोला। तुलसीको पूजा गर्नुका साथै यसको डाँढ तथा पातलाई औषधिको रुपमा पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। तर धेरैलाई थाहा …
काठमाडौँ । मधुमेह अर्थात (सुगर) चिनी रोग मानव स्वास्थ्यका लागि एक चुनौतिको रुपमा रहेको रोग हो। मधुमेह स्वास्थ्यका लागि निकै खतरनाक हुन्छ। तर, मधुमेहको सुरुवाती लक्षणलाई पहिचान गर्न सकियो भने सामान्य रुपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। नियमित व्यायमका साथै विशेष आहारको सहायताले मधुमेहलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यदि मधुमेह भएको छ भने …
-डा अंशुमाली जोशी, मधुमेह, थाइराइड तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ, अल्का अस्पताल मधुमेहका असरलाई अल्पकालीन र दिर्घकालीन गरी २ भागमा बाडिन्छ । अल्पकालीन असर सुगर कम हुने समस्या हो । यसले रगतमा ग्लुकोजको मात्रा घट्न गई बिभिन्न समस्यामा हात काम्ने, बान्ता हुने, टाउको दुख्ने, मुटुको धडकन बढ्ने, शरीरको तापक्रम घट्ने जस्ता …
6 days ago स्वास्थ्य 0
काठमाडौँ । धेरैजसो महिलामा कपाल झर्ने समस्या हुन्छ भने कतिलाई कपाल लामो नहुने समस्याले पिरोलेको हुन्छ। कपाल निकै कम मात्रामा बढ्ने वा बढ्दै नबढ्ने समस्याका कारण धेरै हुन सक्छन्। जसमध्ये प्रदूषण, अस्वस्थ जीवनशैली, खाना सम्बन्धित नराम्रो बानी र शारीरिक गतिविधि आदि हुन सक्छ। केही सरल घरेलु उपाय अपनाएर कपाललाई लामो …
मृगौला मानव शरीरको महत्वपूर्ण अंग हो । मृगौलाको काम शरीरमा पानीको स्तर र अन्य तरल पदार्थ, केमिकल स्तर सही राख्नु र हानिककारक पदार्थ बाहिर निकाल्नु हो । हामीले जे खान्छौँ, त्यसले हाम्रो शरीरमा शक्ति प्रदान गर्छ। खानाबाट पाइने पोषक तत्वलाई शरीरको रगतसम्म पुर्याउने काम पनि मृगौलाले गर्ने गर्छ । तर …
7 days ago स्वास्थ्य 0
पुदिना एउटा यस्तो कुरा हो जसको उपयोग नेपालमा पनि चटनीका लागि गरिन्छ । तर, यसका फाइदा अनेक छन् । यसले हामीले खाएको खानामात्र पचाउँदैन, पेटमा भएका विभिन्न रोगबाट मुक्ति दिन्छ । पुदिनामा मेन्थोल, प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, भिटामिन ए, कपर, आइरनजस्ता तत्व पाइन्छ । पुदिना खाँदा वान्तालाई पनि रोक्न सकिन्छ र पेटमा …
यस्ता लक्षण देखिए रहनुहोस् सावधान ! हुनसक्छ एपेन्डिसाइटिसको समस्या
काठमाडौँ । पेटको दाहिनेतर्फ मुनिपट्टी रहेको थैली आकारको अंगलाई एपेन्डिक्स भनिन्छ । जब एपेन्डिक्स सुनिन्छ यसलाई एपेन्डिसाइटिस भनिन्छ । एपेन्डिसाइटिस हुँदा पेटको तल्लो भागमा दुखाई हुने गर्दछ । यो जुनै उमेरका मानिसलाई पनि हुने गर्दछ । एपेन्डिसाइटिस भएमा यसलाई शल्यक्रिया गरेर हटाइन्छ । एपेन्डिसाइटिसको लक्षण: एपेन्डिसाइटिस हुँदा नाइटो आसपासमा धेरै …
1 week ago स्वास्थ्य 0
को-रोना महामारीमा पनि काम गरिरहेका महिलाले यसरी राख्न सक्छन् आफ्नो स्वास्थ्यकाे ध्यान ! पछिल्लो समयमा महिलाहरुले घर–गृहस्थीको साथै अफिसको काम वा व्यवसाय पनि सम्हालेका छन् । दोहोरो भुमिकाको कारण आफ्नो फिटनेशमा ध्यान दिन सक्दैनन् जसको कारण विभिन्न स्वास्थ्य समस्याको सामना गर्नुपर्छ । यदि थोरै समय आफ्नो लागि निकाल्न सकेमा महिलाहरुले …